आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएको छ । यसअघि पाँच प्रतिशत रहेको स्प्रेड दरलाई ४.५ प्रतिशतमा झारिएको हो ।
यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्दा दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रही एक महिनासम्मको आयात गर्न पाइने परिमाण उक्त महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुष्ठ आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
नीति सार्वजनिक भएपछि अब वाणिज्य बैंकहरुले पनि धितोपत्र व्यवसायी (सेयर ब्रोकर)का रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन् । त्यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले लामो समयदेखि आफूहरुलाई पनि ब्रोकरको लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका थिए ।
नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर नेपालले अहिले देशको अर्थतन्त्रले लय समातेको भन्दै रोजगारी र उद्यमशील गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । तराईमा आएको बाढीले कृषि क्षेत्रमा केही ह्रास आएको भएपनि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदानले गर्दा अर्थतन्त्र बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
एडीबीले नेपाललाई ३९ अर्ब आर्थिक सहायता गर्ने
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई ३९ अर्ब ३२ करोड आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनाल र एडीबीका…
मंगलबार शेयर बजारमा ८.३६ अंकको गिरावट
काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजारमा ८.३६ अंकको गिरावट आएको छ । ०.७० प्रतिशतले घटेको बजारमा १७ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ…
सुनको भाउ घट्यो, कति पुग्याे अाज ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको भाउ घटेको छ । आज छापावाल सुन ५८ हजार ३०० मा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार ५८ हजार ७…
शेयर बजारमा ओरालो, ६ अंकले घट्यो
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्य पुनः ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५ दशमलव नौ बिन्दुले घटेर एक हजार १८९ दशमलव ५६…